တရုတျသွဇာ ပိုလှမျးမိုးမှာကို စိုးရိမျနကွေ — မွနျမာဌာန
ဒီ တုနျ့ပွနျခကျြဟာ ဧရာဝတီ မွဈကွီးနဲ့ ဒီမွဈကို မှီတငျးနထေိုငျနကွေတဲ့ ပွညျသူတှအေတှကျ စိုးရိမျစရာ ဖွဈသလို ဒီမိုကရစေီကို အကောငျအထညျ ဖျောနပေါတယျဆိုတဲ့ မွနျမာအစိုးရက ပွညျသူတှရေဲ့အသံကို လဈြလြှူရှုရာ ရောကျတယျလို့ ဝါရငျ့ သတငျးစာဆရာကွီး လူထုစိနျဝငျးက ဝဖေနျလိုကျပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ မွနျမာအစိုးရကို အကာအကှယျ ပေးလရှေိ့တဲ့ တရုတျနိုငျငံရဲ့ သွဇာ လှမျးမိုးမှုတှဟော တနတေ့ခွား တိုးမြားလာနတောကွောငျ့ တိုငျးပွညျရဲ့ အနာဂတျအတှကျ အတျောကို ရငျလေးစရာပါလို့ လူထုစိနျဝငျးက ထောကျပွပါတယျ။
သတငျးစာဆရာကွီး လူထုစိနျဝငျးကို ကိုဉာဏျဝငျးအောငျက ဆကျသှယျ မေးမွနျထားပါတယျ။
U N မှာ နိုင်ငံတကာရဲ့ ရှုံ့ချကန့်ကွက်မှု့တွေကနေ အသက်ရှုချောင်အောင် တရုတ်ရဲ့(ဗီတိုအာဏာ)ခြေထောက်ဖက်တွယ်ပြီး တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို အညွန့်တုန်း ပျောက်ကွယ်အောင် လုပ်နေတာ ရပ်သင့်ပါပြီ ခေတ်အဆက်ဆက် တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ထိမ်းသိမ်းခဲ့တဲ့ ကျုပ်တို့ ဘိုးဘွားတွေရဲ့မျက်နှာ နောင်အနာဂတ်မှာ တိုင်းတပါးသားတွေရဲ့ကျွန်ပြုပြီး မတရား အနိုင်အထက်ပြုခံနေရမဲ့ သား သမီး မြေးမြစ်တွေရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်ကြပါ ဗျာ !
တရုတ်လုပ် ပစ္စည်းမှန်သမျှ သပိတ်မှောက်ကြ ။ Don't use China made products at all !!